Iwu - Okwu Foundation • Akwụkwọ, Audio, magazin, na ihe ndị ọzọ
Akwụkwọ, Akwụkwọ na Audio
Echiche na Mbibi, Nwoke na Nwanyi na Nwa, Ndi ochichi onye kwuo uche ya bu ochichi onwe onye na Masonry na akara ya dịkwa n'ụdị eletrọnịkị na anyị Ebook peeji.
Thinking and Destiny Azụ siri ike
Thinking and Destiny Akwụkwọ ọdịyo (USB Flash Drive, usoro MP3)
Iwu si Amazon
Ndị otu niile nke Okwu Foundation, na agbanyeghị ụdị nkwado ị họọrọ, ga-enweta akwụkwọ akụkọ anyị nke nkeji iri na anọ, Okwu ahụ na ntanetị 40% na akwụkwọ Percival. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịbụ onye otu wee were iwepu ego ahụ n'ihe ị nyere gị, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị bụbu onye otu ma ịchọrọ itinye ego ahụ, biko Kpọtụrụ Anyị idobe iwu gị site na nlele, ekwentị ma ọ bụ faksị.
Ịkwado Onye Otu
Onye Okenye ma ọ bụ Onye Mmụta
Ruo ihe karịrị afọ 70, The Word Foundation agba mbọ na-eme ka ọrụ Harold W. Percival dịrị ndị niile na-achọ Eziokwu. Onyinye gị nwere ekele dị ukwuu ga-enye aka ịgbasa iru eru anyị ma kwadokwa ọtụtụ akụkụ dị mkpa nke ọrụ anyị, dị ka idebe akwụkwọ ndị a na-ebipụta, mbipụta eletrọnịkị, mgbasa ozi, na inye ndị mkpọrọ, ụlọ akwụkwọ ọbá akwụkwọ, na ndị na-enweghị ike inweta akwụkwọ n'efu.
Kwado anyị na Ụzọ ndị ọzọ
Biko kpọtụrụ anyị banyere:
Na-eme onyinye ego kwa afọ
Inweta onyinye nke ebuka ma ọ bụ nchekwa
Hazi maka inye onyinye onyinye ọnwa
Icheta Okwu Foundation n’ime uche gi